အိပ်နေရင်း_သေသွားတယ် ….ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ …. - Uptodate MM
Uptodate MM | April 13, 2019 | ကျန်းမာရေး | No Comments
အိပ်နေရင်း_သေသွားတယ် ….ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ ….(ဒါမျိုးဘာလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ လူတိုင်း သိထားဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
သာမာန်​အားဖြင့်​ ကျန်းမာ​ရေး​ ကောင်းတယ်​ လို့ ထင်​ရတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​​ ညက ကွယ်​လွန်​ သွားပြီ ဆိုတာမျိုး….
ဟင်​’… မ​နေ့က ဘဲ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ မက်​စင်​ဂျာ က​နေ စကား​ပြောလိုက်​​ရသေး ခု ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံးပြီ ဆိုတာ မျိုး​တွေ မကြာမကြာ ကြားကြား​ နေရတာ ဘာ​ကြောင့့်​ပါလဲ ….
အ​ကြောင်းက​တော့ ညမှာ အ​ပေါ့စွန့်​ဘို့ အိပ်​ရာ က အ​လောသုံးဆယ်​ အထ မှာ ဦး​နှောက်​ကို​ သွေးပို့မှု နည်းသွားလို့ပါ။ညလည်​ လောက်​ ဆီးသွားချင်​လို့ နိုးရုံ​လေးနဲ့ နှလုံးသားလျှပ်​စီးမှုပြ​ ကောက်​​ကြောင်း ပုံစံ-ECG pattern ​ပြောင်းလဲပါပြီ….
ဒီအထဲ ဝရုန်းသုန်းကား အမြန်​ထလိုက်​ဦးမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ ဦး​နှောက်မှာ ​သွေးနီအား နည်းပြီး နှလုံးသားရဲ့ ခုတ်​ညှစ်​မှု စွမ်းအား ပျက်​ပြားသွားတတ်​ပါတယ်​ ။
၁- ပထမ မိနစ်​ဝက်​ ->-> အိပ်​​ပျော်​​နေရာက နိုးနိုးချင်း မိနစ်​ဝက်​ အိပ်​ရာထဲမှာ ဆက်​ပြီ လဲ​လျောင်း​နေပါဦး။
ဒါကြောင့်​ ဒီအချက်​ အ​ကြောင်းအရာ ကို မိမိ မိသားစုဝင်​များ၊ မိတ်​​ဆွေများ၊ ချစ်​အပ်​ ခင်အပ်​​သူများအား အသိ​ပေး မျှ​ဝေပါ၊ နိုးကြား​စေပါ၊ ကြီးကြီး ငယ်​ငယ်​ ရွယ်​ရွယ်​ လတ်​လတ်​ အသက်​အရွယ်​မ​ရွေး ဒီအ​ခြေအ​နေဆိုး​တွေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။
မျှဝေတယ်​ ဆိုတာ အ​လေးထားခြင်းဘဲ မဟုတ်​ပါလား၊ သိပြီသား ဆိုလဲ အသစ်​ အသစ်​လို သ​ဘောထား ပြီးလိုက်​နာ ကျင့်​​ဆောင်​ပါ​လေ​လော့…..။
Share ပြီး မျှဝေသွားပါ……By Lwin Pyin
Thanks Ahma Betty Croft for this post
ဝမ်း ချု ပ်နေ သူများ အ တွက် အေ ကြာေ ပြ ဝမ်းမှ န်စေ သည့် က ရွတ်ခွေ